Sideed U Suuqgeynaysaa Joogtaynta iyo Kala-duwanaanta Calaamaddaada? | Martech Zone
Maalinta Earth waxay ahayd toddobaadkan waxaanan aragnay socodsiinta caadiga ah ee qoraallada bulshada ee ay shirkadaha ku dhiirrigeliyaan deegaanka. Nasiib darrose, shirkado badan - tani waxay dhacdaa oo keliya sanadkiiba mar maalmaha kalena waxay dib ugu noqdaan meheraddoodii sidii caadiga ahayd.
Toddobaadkii hore, waxaan dhammeystirey aqoon-isweydaarsiga suuq-geynta shirkad weyn oo ka tirsan warshadaha daryeelka caafimaadka. Mid ka mid ah qodobbada aan ku soo qaatay aqoon isweydaarsiga ayaa ahaa in shirkaddoodu u baahan tahay inay si wanaagsan u suuq geyso saameynta ay shirkaddoodu ku leedahay deegaanka, joogtaynta, ka-qaybgalka, iyo kala-duwanaanta.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkaduhu waxay inta badan ku shubeen qayb ka mid ah faa'iidadooda qaar ka mid ah hay'adaha samafalka weyn, waxay ku tuureen war-saxaafadeed ku saabsan tabarucaadkooda, waxayna ugu yeereen maalin. Taasi mar dambe ma jareyso. Macaamiisha iyo ganacsataduba si isku mid ah ayey u raadinayaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadaha bixiya badeecadaha iyo adeegyada ay rabaan also laakiin sidoo kale ku shaqeeya wanaagga dadweynaha. Kaliya maahan macaamiisha tan raadinaya, sidoo kale shaqaalaheena mustaqbalka.
Intay macaamiil yihiin, waxaan aad ula dhacay sida Shirkadda Teknolojiyada ee Dell waxay u heellan tahay sidii ay u dhisi lahayd saameyntooda bulshada silsiladdooda sahayda iyo dhaqanka shirkadaha. Waxay tusaale fiican u yihiin in la raaco. Sidoo kale, waxay sii wadeen inay wadaan hal-abuurnimo, waxay u tartamayaan sidii hore, mana u huraan faa'iido inay sidaas sameeyaan. Waxay garwaaqsan yihiin inaysan kaliya ahayn wax sax ah in la sameeyo, sidoo kale waa istiraatiijiyad ganacsi oo weyn.
Deegaanka iyo Joogtaynta
Waa kan hal tusaale oo cajiib ah… Dell wuxuu dib u warshadaynayaa caagagga badda xirmooyinkooda. Joogtaynta iyo shaqadooda deegaanka intaas kuma joogsadaan, in kastoo. Dib-u-warshadaynta ka sokow, waxay sidoo kale ka shaqeynayaan calaamadeynta bey'ada, yareynta tamarta, iyo yaraynta raadadka kaarboonka. Waxay ku dheereeyeen xiriir kasta oo ka mid ah silsiladdooda.
Kala duwanaanta iyo ka wada qaybgalka
Dell sidoo kale waxay u furantahay daacadna ka tahay la'aanta kala duwanaanshaha iyo kaqeybgalka warshadaha teknolojiyadda. Tani waxay taariikh ahaan u horseeday beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenku inaysan helin fursad ay kuwa kale ku dhex leeyihiin warshadaha. Dell waxay ballan-qaadday ilo, maalgelin ku sameysay barnaamijyada waxbarashada carruurnimada hore ee adduunka, si ay u noqoto mid hufan oo ku saabsan warbixintooda. Waxay sidoo kale horay u dhigeen bartamaha qoristooda:
Daahfurnaan iyo Warbixin
Daahfurnaanta ayaa fure noqotay sidoo kale. Dell ayaa leh warbixin joogto ah horumarkiisa, iyadoo howlahooda loo dhigayo hore iyo bartamaha si macaamiisha, ganacsiyada, iyo maalgashadayaashu uga warqabaan horumarkooda. Weligood ma sheeganayaan inay leeyihiin go'an arrimahan, laakiin waxay si furan u sii wadaan inay soo sheegaan oo muujiyaan horumarkooda. Tani waa suuqgeyn weyn.
Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelin lahaa inaad rukumato oo aad dhageysato Faylasha Dell Luminaries in aan la wadaago Calaamadee Schaefer. Waxaan haynaa kursi safka-koowaad ah, oo aan wareysanayno hoggaamiyeyaasha, wada-hawlgalayaasha, iyo macaamiisha shirkadda Dell ee kala duwanaanshahaas sameynaya.
Dell Podcast Podcast
Marka, maxay tahay istiraatiijiyaddaada shirkadeed sideese magacaaga looga arkaa dhinaca wanaagga bulshada? Ma jiraan waxyaabo aad sameyn kartid si aad u beddesho howlahaaga gudaha si aad u horumariso joogtaynta iyo ka-mid ahaanshaha? Iyo, ugu muhiimsan, sidee ula xiriiri kartaa dadaaladaas si wax ku ool ah u leh rajadaada iyo macaamiishaada?
Ha iloobin… ku tabarucida lacagta kuma filna. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay filayaan inay arkaan bulsho wanaag ku dhex milmay dhaqankaaga iyo hawl kasta. Macaamilkaaga xiga ama shaqaaluhu wuxuu doonayaa inuu ogaado inaad u heellan tahay inaad adduunka ka dhigto meel wanaagsan, oo aanad uga tagin qof kale inuu sameeyo.
Tags: kala duwanaantadeegaankacaag badeedqoristawaaritaanka